ပျင်းရိခြင်းသည် သင့်အလုပ်မှာ ဒုက္ခပေးနေသလား - Myanmar Network
Posted by Yamin Aye on February 26, 2015 at 10:00 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်တွင် အလုပ်ဆိုတာနဲ့ ကြုံဆုံကြမည်မှာ လူသား တိုင်းပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။ အရွယ်ရောက်သော လူတစ်ယောက်တွင် အလုပ်ဆိုသည့်အရာနဲ့ ထိတွေ့ရမှာ ကတော့ ဓမ္မတာပင် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုနည်းပညာတိုးတက်လာသောခေတ်တွင် လူငယ်တိုင်း အလုပ်ကိုယ်စီ ရှိကြဖို့ အလိုအပ်ဆုံးပင် ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာမှာ အပြောင်းအလဲတွေ ရှိလာနေ သည်။ ကျွမ်းကျင်မှု အခြေခံမှာ အသိပညာ အခြေခံဘက်သို့ နေ့ချင်း ညချင်းဆိုသလို ပြောင်းလဲလာနေသည်။ အတိတ်ကာလနှင့် အဆက်အစပ်ကင်းသော တသီးတသန့် ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့သည်လို့ ဆိုနိုင်ပေသည်။ ရှေးက ထုတ်လုပ်သူက သူ့စိတ်ကူးနှင့် သူ ထုတ်လုပ်တာကို စားသုံးသူက သုံးကြရသည်။ ယခုတော့ ဒီလို မဟုတ်တော့ပေ။ ဘယ်သူတွေ ဘာတွေသုံးသလဲဆိုတဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအပေါ် မူတည်ပြီး ပြုပြင် ဖန်တီးမှုများနဲ့ တီထွင်လာကြသည့် နည်းပညာခေတ်လို့ ဆိုလာနိုင်ပါသည်။ လူကြီးနဲ့ လူငယ် ခြားနားခြင်း သည်ပင် လူငယ်တို့အတွက် အံဝင်ခွင်ကျ မောင်းနှင်အားဖြစ်လာသည်။ လူငယ်တို့ရဲ့ ပင်ကိုစရိုက်ကိုက တစ်ဘာသာရှိနေသည့်စိတ်က အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုသည့် စိတ်အခြေခံ အားအင်တစ်ရပ်ကို ဖြစ်ထွန်းစေပါသည်။ အထူးသဖြင့် လူငယ်တိုင်းမှာ ရှိနေသည့်စိတ်က အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ် အယူအဆသစ်များ ထုံမွှမ်းနေဖို့ လိုအပ်လှပေသည်။ အလုပ်ကြိုးစားခြင်းသည် ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းလမ်းကို တည်ဆောက်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
လူတိုင်း လူတိုင်း အလုပ်လိုသာ သဘောထား၍ လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် အလုပ်ကို ကြိုးစား၍ လုပ်ကိုင်ခြင်း တို့ကြားတွင် ခြားနားမှုရှိသည်။ အလုပ်ကို အလုပ်လိုသာ သဘောထား၍ လုပ်ကိုင်လျှင် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသော ရလဒ်ကိုတော့ ရရှိမည်။ အလုပ်ကို ကြိုးစား၍ လုပ်ကိုင်လျှင်မူ အကောင်းဆုံးရလဒ်ကို ရရှိမည် ဖြစ်ပေသည်။ ဇွဲရှိရှိနှင့် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားအားထုတ်လုပ်ကိုင်မှသာ လုပ်ငန်းခွင်ရော ဘ၀တွင်ပါ ပေါကြွယ်နိုင်ပါမည်။ အလုပ်အပေါ် သစ္စာရှိစွာ ဇောက်ချလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ချက် ရရှိနိုင်ရန် လုံလောက် သော စွမ်းအားကို ရရှိပါမည်။ သင် လုပ်လေသမျှတို့၌ လုပ်သင့်၍ လုပ်နေသည်ဟု မခံယူဘဲ စိတ်ရင်းအမှန်နှင့် ပြင်းပြသော စိတ်ဆန္ဒများပါ ထည့်ပေါင်း လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ အလုပ်က သင့်ငွေကြေး ပိုင်းဆိုင်ရာရော ကျန်းမာခြင်းကိုပါ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး အလုပ်လုပ်နေခြင်းကြောင့် မကောင်းမှု အများအပြားမှလည်း ရှောင်ကျဉ်ရာ ရောက်သည်ကို သင် အကျိုးခံစားရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နေ့တာလုံး အလုပ်ကို ကောင်းစွာ ကြိုးစားပြီး လုပ်ဆောင်ပြီးစီးသည့်နေ့မျိုးတွင် သင်သည် အင်မတန် ကျေနပ်တင်းတိမ် ပျော်ရွှင်ရလိမ့်မည်။ ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသော အသက်ရှင်သန်မှုသည် စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်သည့် အရာ အမူအကျင့်များကို ၀ါးမျိုးလိုက်ပေမည်။ အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် သင့်ဘ၀ကို မြှင့်တင်ရာ ရောက်သည်။ အလုပ် ကြိုးစားခြင်းနှင့် ဇွဲလုံ့လရှိခြင်းတို့သည် သင့်အား အများနှင့်မတူ တမူထူးခြားစေပြီး ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်း ကြောင့် လူအများကြားတွင် သိသာထင်ရှားစေတဲ့အပြင် သင့်လုပ်ရပ်များကိုလည်း ထိုသူတို့ သတိမူလာပါ လိမ့်မည်။
အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သာ လိုအပ်သော အရာဝတ္ထုများကို ရရှိနိုင်ပြီး ထိုအရာများဖြင့် အခြားသူများရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းကူညီနိုင်ပါမည်။ ကျွန်မတို့အားလုံး အလုပ်လုပ်ကြမှသာ ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် ကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှ လိုအပ်နေသူများကို ပေးကမ်းထောက်ပံ့ ကူညီနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ သင်လမ်းစ ရှာတတ်လျှင် ၀င်ငွေရနိုင်မည့် နည်းလမ်းမြောက်မြားစွာ ရှိပါသည်။ မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ အခြား သူများရဲ့ အိတ်ကပ်ထဲမှ ငွေကို အားကိုးပြီး အသက်မရှင်ပါနှင့်။ ကျွန်မတို့အားလုံးတွင် မိမိရဲ့ စားဝတ်နေရေးအတွက် မိမိကိုယ်တိုင် မှန်မှန်ကန်ကန် ရှာဖွေလုပ်ကိုင်စားသောက်နေထိုင်ရန် တာဝန်ကိုယ်စီ ရှိကြပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ရဖို့ရန် ခက်ခဲကောင်း ခက်ခဲမည်ဖြစ်သော်လည်း ၀င်ငွေရဖို့ရန် မပျင်းမရိ နည်းလမ်းရှာပြီး တစ်ပါးသူများကို မမှီခိုဘဲ မိမိကိုယ် မိမိ ရပ်တည်နိုင်ရမည်။
သင်တစ်ခု သိထားဖို့ကတော့ အောင်မြင်မှု ဆိုသည်မှာ မိမိ၏ကိုယ်တွင်းမှ အစပြုပြီး မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးနိုင်၏ ဆိုတဲ့ အမြင်ကို ထားရှိဖို့သာ လိုအပ်လှပါသည်။ သင့်အရည်အသွေးများကို အမြဲတိုးတက်မှုရှိနေစေရန် အမြဲဖန်တီးနေရမည်။ ပါးနပ်လိမ္မာစွာ အလုပ်လုပ်တတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ တူညီသော တစ်ချိန်တည်းတွင် အမှုသာ၍ ပြီးစီးနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ယခင် ကထက် ပို၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းတို့ကို ဆိုလိုပါသည်။ သင်သည် သင့်ပြိုင်ဘက်ထက် ပိုမိုသာပြီး ဒီထက် ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်လျှင် သင့်အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် အစွန်အဖျားရောက်နေသော နေရာမှ အချက် အချာကျသောနေရာသို့ လူအများက သင့်ထုတ်ကုန် ၀န်ဆောင်မှုတို့ကို တမ်းတရသော အနေအထားသို့ အမှန်တကယ် ရောက်လာမည် ဖြစ်ပေသည်။လူတိုင်းပင် စိတ်ချမ်းသာမှုကို အလိုရှိကြသည်။ စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရမှ လူ့ဘ၀ရကျိုးနပ်မည်ဟု ယူဆကြသည်။ ထို့ကြောင့် လူတို့သည် စိတ်ချမ်းသာမှုတည်း ဟူသော ပန်းတိုင်ဆီသို့ ရည်မှန်းသွားနေကြသည်။ စိတ်ချမ်းသာမှုကား နေရောင်ခြည်ထဲ၌ ပြိုးပြိုးပြက်ပြက် တောက်ပနေသော မြူမှုန်ကလေးများကို လက်ဖြင့် ဖမ်းခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်သကဲ့သို့ ရနိုင်ရန် ခက်ခဲလှသည်ဟု လူတို့ယူဆဖွယ်ရာ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ စိတ်ချမ်းသာမှုကို လိုချင်ကြသည်မှာ လူတိုင်းရဲ့စိတ်အတွင်းသန္တာန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဖို့ လိုသည်မှာ စိတ်ချမ်းသာမှုကို မရနိုင်လောက်အောင် မည်သည်က တားဆီးထားပါသနည်းဟူသော အဖြေကား ရလေပြီ။ ယင်းမှာ ပျင်းရိခြင်းနှင့် ငြီးငွေ့ခြင်းသည် စိတ်ချမ်းသာမှုနှင့် ဖီလာဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိကြရလေသည်။ ပျင်းခြင်းသည် ပျော်ခြင်းရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ အများအားဖြင့် ငြီးငွေ့ခြင်းကို လူတို့သည် အပျော်အပါးနှင့် ဖြေရန် အားထုတ်တတ်ကြပါသည်။ အပျော်အပါးသည် ငြီးငွေ့ခြင်းကို ပပျောက်စေနိုင်သည့် ဆေးအစစ်အမှန် မဟုတ်ချေ။ အပျော်အပါးသည် တစ်ခဏတာမျှသာ ဖြေဖျော်မှုဖြစ်ပြီး စိတ်ချမ်းသာမှုအစစ် မဟုတ်သည်သာမက စိတ်နှလုံး မသာယာဖွယ်သော မကောင်းကျိုးများကိုလည်း ပေးတတ်သေးသည်။ ကျွန်မတို့သည် ငြီးငွေ့ခြင်းနှင့် ပျင်းရိခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကို ရှာသောအခါ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘ၀တစ်သက်တာ အချိန်ကို ဇယားချ၍ မသုံး တတ်ကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရပေသည်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘ၀တစ်သက်တာ အချိန်ဇယားသည် ညီညာ မျှတမှု မရှိ၊ တစ်စုံတစ်ခုက လို၍ တစ်နေရာက ပိုနေလျှင် ထိုလိုသောအချိန်၊ ပိုသောအချိန်မှာ ကျွန်မတို့ အဖို့ ပျင်းရိခြင်းနဲ့ ငြီးငွေ့ဖွယ်ရာ ဖြစ်လာတတ်ပေသည်။
အလုပ်လုပ်ရာ၌ မည်သည့်နည်းဖြင့် ထိပ်တန်းရောက်နိုင်မည်နည်း။ သင် ကြိုးစားသည့်အပြင် ပါးနပ် လိမ္မာစွာရှိဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ပါးနပ်လိမ္မာစွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဟုဆိုရာ၌ အလုပ်လုပ်ပြီး တိုးတက်မှု ရှိစွာဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တတ်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ ယခုလက်ရှိအချိန်အထိ လုပ်ဖူးသမျှတွင် အကောင်း ဆုံးဖြစ်သည်ဆိုသော အရာထက် စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်ကောင်းမွန်နေအောင် မည်ကဲ့သို့ ကြိုးစား လုပ်ဆောင်ရမည်ကို သင် အမြဲဆန်းစစ်သင့်သည်။ လူ၏ တိုးတက်မှု ပျက်စီးစေသည့်အရာမှာ ပျင်းရိခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ လူ့သဘာဝအရ ပျင်းရိတတ်သည်။ ပျင်းရိခြင်းကြောင့် သင့်အလုပ်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသည်ကို သင် သတိပြုမိမည် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်မတို့အားလုံးသည် တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းအားဖြင့် ပျင်းရိကြသည်။ လူအချို့သည် တစ်နေရာရာ၌ ကြိုးစားအားထုတ်တတ်ကြပြီး တစ်နေရာရာတွင် အပျင်းထူတတ်ကြသည်။ ယနေ့လုပ်ရမည့်အလုပ်ကို မနက်ဖြန်သို့ ရွှေ့တတ်ကြပေသည်။ လူတိုင်း သတိမမူမိသောအရာကတော့ အပျင်းထူခြင်းက ၀ါးမျိုနေခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မတို့ ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်ဆောင်ကြသည့်အပိုင်း၌ ကြွယ်ဝ ပြည့်စုံကာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း သာသာယာယာဖြင့် အစီအစဉ်တကျရှိပြီး၊ ကျွန်မတို့ သတိမမူ လျစ်လျူရှု ထားသည့် ဘ၀အစိတ်အပိုင်းတို့၌မူ အပျက်အစီးများနှင့် နာကျင်ခြင်းများသာ ရောပြွန်းနေမည် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါတလေ လူ့အကျင့်ဆိုသည့်အတိုင်း အလုပ်ကို သုံးလေးရက်လောက် လုပ်ပြီး တစ်လလောက် နားချင် နားနေပေလိမ့်မည်။ ကျွန်မတို့ဆီမှာ အစဉ်အမြဲ ခိုအောင်းနေသည့် ပျင်းရိခြင်းဆိုသည့်အရာကို လူတိုင်း တိုက်ဖျက်သင့်ပေသည်။
ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင် ကျွန်မတို့ကိုယ်တွင်း၌ အစဉ်ပင် တိုက်ပွဲဝင်နေရသည်။ ပျင်းရိခြင်းကို အောင်နိုင် သည့် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းမှာ မိမိကိုယ် မိမိ ပျင်းရိကြောင်း ၀န်ခံခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ အတွင်းသန္တာန်ထဲမှာ ငြင်းဆိုနေသော အရာများကို အောင်နိုင်ဖို့ စတင်ပြင်ပြီး ကျွန်မတို့ လုပ်သင့်သည့် အရာများကို ပြီးမြောက်အောင် စတင်လုပ်ဆောင်ပါ။ ပျင်းရိခြင်းများကို စတေးလိုက်ပြီး တာဝန်မယူချင်၍ ပေးသော ဆင်ခြေများကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ လူပျင်းသည် အသိတရား မရှိသည့်အပြင် ပျင်းရိခြင်းကြောင့် လူမိုက်မည်၏။ ပျင်းရိခြင်းက သူ့ဘ၀ကို ၀ါးမျိုနေပြီး သူအလိုရှိသော ကောင်းသည့်အရာ အားလုံးကို ဖျက်ဆီးပစ်နေကြောင်းကို နားမလည်ပေ။ ကျွန်မတို့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သော အရာများအတွက် ကောင်းကျိုးများကို အမှန်တကယ် ရရှိခံစားကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ လူပျင်းတစ်ယောက် ထားရှိသော အတွင်းသန္တာန်မှာ ဘ၀တွင် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနှင့် အပူအပင်ကင်းစွာ နေနိုင်ရေးဖြစ်သည်။ ပြဿနာ အပူအပင် ကင်းရန် နေထိုင်နိုင်ရေးသည် အတွင်းသန္တာန် မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့ နေထိုင်သွားခြင်းဖြင့် ဆုတ်ယုတ်ခြင်းများ ရရှိပိုင်ဆိုင်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒီတော့ ပျင်းရိခြင်းကို ကျော်လွှားနိုင်မည့် လမ်းကတော့
၁။ သင်သည် လူပျင်းဖြစ်သည်ကို ၀န်ခံပါ။
၂။ ဆင်ခြေများ ပေးနေခြင်းမှ ရပ်တန့်ပါ။
၃။ နေ့စဉ်ပြုလုပ်ရမည့် ကိစ္စများကို ကောင်းကောင်းရေးဆွဲပြီး အမြန်လုပ်ဆောင်ပါ။
၄။ မဆိုင်းမတွ ယခုပင် ထလုပ်ပါ။
၅။ ပန်းတိုင်ထားရှိပြီး အပြီးသတ်ရမည့် ရက်စွဲများ သတ်မှတ်ပါ။
၆။ ဇွဲ လုံ့လရှိပါ။
၇။ မိမိကိုယ်ကို အခြားသူများ၏ အစစ်အဆေးကို ခံယူရန် အသင့်ရှိပါ လို့ ပြောချင်ပါသည်။
ပျင်းရိခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ဖျက်ဆီးစေတတ်သည်။ စိတ်ဓာတ်ညံ့ဖျင်းစေတတ်သည်။ ဥာဏ် ထိုင်းမှိုင်းစေသည်။ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး နှောင့်နှေးစေသည်။ မကောင်းကျိုးဟူသမျှ၏ အရင်းအမြစ် ဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်မတို့ တွေ့မြင်ကြရပေသည်။ ပျင်းရိခြင်းကို အောင်မြင်ခြင်းဆေးနည်းသည်ကား အနားမနေ အလုပ်လုပ်ခြင်းသာလျှင် ဖြစ်ပေတော့သည်။ လူသားအားလုံး ပျင်းရိခြင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ…။
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on February 26, 2015 at 17:14
မိမိရဲ့တာဝန်အလိုက် ယူထားတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို ရာထူးကြီးသည်ဖြစ်စေ ငယ်သည်ဖြစ်စေ
Monthly Plan ရေးဆွဲပြီးလုပ်ပါ။
ဘယ်နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်သက်တာကြာလာတယ် ...
(၁)နှစ် လည်း ဘာမှမထူး၊ (၂)နှစ်လည်း ဘာမှတိုးတက်မလာ လူတွေလည်းရှိပါတယ်
ပညာ တိုးတက်ရင်သော်လည်းကောင်း၊ လစာတိုးတက်ရင်သောလည်းကောင်း၊ အနည်းဆုံး တစ်နှစ်တစ်ခါလောက်တော့ ဘ၀အတွက် တိုးတက်မှ အဆင်ပြေမည်။
မြိ့တစ်မြို့၏ အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ (10)တန်းဖြေဆိူသူ (၁၀၀) ရှိသည်ဆိုပါစို့၊ မိမိ စာမေးပွဲကျဆုံးသည်နှင့် မိမိကို ဖြတ်ကျော်သွားသူမှာ (99)ယောက်ဖြစ်သည့် ။ မြို့တစ်မြို့နှင့်တွက်ကြည့်သည်ဆိုပါက နည်းသည်ဟု ဆိုပေမယ့် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့်ဆိုလျှင် ဆိုဖွယ်ရာမရှိတော့ပေ။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ နည်းနည်းများများပျင်းရိတတ်ကြသည်။ ပျင်းရိတာကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြတတ်ကြသည်။
Reason မပေးပါနှင့် တိုးတက်ရာလမ်းကြောင်းကိုရှာပါ။
ဘယ်သူမပြု မိမိမှု ဖြစ်သလို၊ မိမိလုပ်ဆောင်ချက်သည်လည်း မိမိ၏တိုးတက်ရာလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါကြောင်း။
Star MemberPermalink Reply by Yamin Aye on February 27, 2015 at 9:45
Permalink Reply by Khin Myat Myat Thin on March 19, 2015 at 16:41
Thanks,Start from now.
Star MemberPermalink Reply by Yamin Aye on March 24, 2015 at 11:37
Permalink Reply by Aye Nyein Sis Paing on March 24, 2015 at 12:01
Many Thanks for your article! I get many knowledge from this article.
Permalink Reply by Ko Htu Sun on April 24, 2015 at 16:09
Thanks your advicing, let me start now!
Permalink Reply by Kyaw Thu on April 27, 2015 at 7:35
Haveapassion what you want to work on!
Permalink Reply by Zu Zu on April 28, 2015 at 4:06
I willbno longer bored.. thank u for ur article.. :)